トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Pachinko emakhazeni ka isimo wenkokhelo ugqozi phakathi nesonto kanye iholide
Ngo wamakhaza pachinko, kuyothiwa ihlukaniswe esitolo ukukhombisa isisusa izitolo kanye ngezimpelasonto ukukhombisa isisusa ngezinsuku zeviki. Esikhathini esifanayo pachinko eshintsha, kungani umehluko onjalo uyaphuma, sizobheka ukuthi mina kufanele Mikiwamere nomdlandla wanoma yini indawo. Pachinko emakhazeni ukukhombisa isisusa zeviki, sivame ukugcina okungukuthi ababusiswe izimo indawo.
isibonelo, akasebenzisi ubuhlobo esitolo okuhle phambi esiteshini izitolo kanye usuku lwesonto.
pachinko ezifana ezitolo, futhi abaningi sehliselwe ikhasimende ukuthi obani abayokuya zeviki eziningi, kukhona ukuthambekela ukuzama ukwazisa. Amakhasimende eza phakathi nezinsuku, uma kuqhathaniswa amakhasimende ungezi kuphela ngezimpelasonto, kufanele futhi amanani angalingani izinsuku futhi uqhubeke ukutshala nathi. Okuhle pachinko emakhazeni wokusebenza ngezinsuku zeviki, uphinda esetholakele ngokunciphisa phakathi nesonto amakhasimende, ingabe futhi ake ukuqinisekisa yokuthengisa ozinzile futhi inzalo enkulu kanye nokusebenza.
salokho, kodwa degrees ezimbalwa phakathi nesonto, ukuze sifeze ibhizinisi ukukhombisa ugqozi.
Nokho, kubonakala sengathi kanzima ngempela ukutshela. Izinsuku zeviki, ngoba kukhona izinsuku 5 ngesonto, kunokuba khipha konke ngesikhathi esisodwa, nawe ungase uye ngokuya kancane izabelo kancane. Esimweni esinjalo, futhi ihlaselwe izinzipho ukulungiswa, Horukon kulungiselelwa, siyeza ayisekho kuphela ukubona negagasi ROM isimo esikhona manje. Ingabe abengezanga phakathi nesonto kwezinsuku ezimbalwa, ungenawo bakwazi ukuthola zeviki nesisusa.
Nokho, sasemakhazeni pachinko ezinjalo, ngakho ngezimpelasonto namaholidi kuyoba ukuqinisekisa ukuthi usuku iqoqo, okungafanele wamshaya Ngicabanga ukuthi kuphephile.
ahoxise, kodwa kuyinto emakhazeni pachinko ukukhombisa isisusa ngemigqibelo kanti futhi ngamaSonto, kuyoba landile pachinko eshintsha nezitolo suburban ukuthi abakwazi abe operation esitebeleni. Njengoba
ngoMgqibelo nangeSonto futhi ngosuku bakhuphuke ukusebenza ngokwemvelo, ngokuvamile kuba esingakanani okufanele usichithe nokuvulwa kuvamile, ukuthi yaba pa o ukuthi kuyenzeka isimo akukwazi. Elisho ukuthi iqiniso lokuthi kumelwe ubonise isisusa ngemigqibelo kanti futhi ngamaSonto, ngosuku ngezimpelasonto zabantu ubuthe, ke kwakuhlobene phakathi nesonto wokusebenza nge bahle Ngoba kukhona sibalo.
Ngo sasemakhazeni pachinko ezinjalo, noma kangcono inkonzo kuphela ngeMigqibelo ethile nangezikhathi ngamaSonto, noma zama ukulungisa umklomelo we elinganiselwe, ungase ubone umzamo ngisho nangaphezu yokubhadala. Yokudluliswa isikhathi kukhona eyashukumisela, ngaphandle eshintsha pachinko ukukhombisa isisusa phakathi nesonto, ngicabanga ukuthi kulula ukuyiqonda. Ngaphezu kwalokho, ngeMigqibelo ethile nangezikhathi ngamaSonto zikhona izinsuku ezimbili kuphela. Ngoba ukuhumusha kuya lula isikhalazo ushukumiseleka ukuba baqonde okwamanje, kufanele ukuya isiteleka okuhloswe ngaso izinsuku ezimbili ngoMgqibelo nangeSonto. Uma une inhloso, kancane phakathi nesonto ukugijima, ngicabanga ukuthi abantu pachinko eshintsha ukukhipha eyashukumisela ngezimpelasonto ozuza iphesenti luyanda.
pachinko emakhazeni nogqozi, amasevisi kanye nemiklomelo ngaphezu ibhola out, degree of isimemezelo amaphosta kanye nokunye okufana nalokho, kukhona ingxenye ukuthi kuyabonakala ngisho kulo kwabavela ngaphandle. Pachinko emakhazeni engihamba ukudlala, usuphelelwe amandla ashukumisayo kuzo zombili phakathi nezinsuku kanye namaholide, ethi vele useyazi ukuthi isisusa iyabonakala ukuthi ngokumangalisayo khona.